नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : यो होटल वाला मगर भाईको भात बेच्ने तरिका गजबै लाग्यो बा ! ल आउनुहोस खाना खानुहोस, मिठो बासमती चामलले बनाको, पिसेको आचार, जवाईलाई जस्तो घिउ झ्वाई ,झ्वाई ,हजुर को बोलि बन्दुक को गोली ! जय मनकामना !
यो होटल वाला मगर भाईको भात बेच्ने तरिका गजबै लाग्यो बा ! ल आउनुहोस खाना खानुहोस, मिठो बासमती चामलले बनाको, पिसेको आचार, जवाईलाई जस्तो घिउ झ्वाई ,झ्वाई ,हजुर को बोलि बन्दुक को गोली ! जय मनकामना !